Bryan Thompson: Fetin'ny saina dia maneho ny firaisankina sy ny firaisana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Bryan Thompson: Fetin'ny saina dia maneho ny firaisankina sy ny firaisana
Bryan Thompson, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi, dia nilaza hoe: “Ny fankalazana izay atao manerana ny firenena amin'ity fetin'ny sainam-pirenena ity amin'ny 1 Novambra dia fisehoan'ny firaisankina sy ny firaisan-kina eo amin'ny olom-pirenena sy ny mponina. Ny sainan'ny Emira Arabo Mitambatra dia ampahany amin'ny mombamomba ny UAE; maneho ny fandeferana, fananana, sorona natao ary fiandrianam-pirenena.
“Nifanindry tamin'ny tsingerintaonan'ny naha-praiminisitra an'i Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, filohan'ny UAE, ny fetin'ny saina dia daty manandanja iray ho an'ny firenena. Fotoana iray ahafahana misaintsaina ny zava-bita sy ny fahombiazan'ny firenena, ary maneho ny fankasitrahantsika an'ireo mpitarika fahitana an'ny UAE, taloha sy ankehitriny.
“Amin'ny fananganana ny sainam-pirenena amin'ny trano fonenan'i Abu Dhabi rehetra dia manavao ny fanoloran-tenanay amin'ny fandraisana andraikitra nasionaly sy amin'ny fampiharana ny soatoavim-pirenena isan'andro. Ny Abu Dhabi Airports dia nanao dingana bebe kokoa satria tamin'ny volana lasa dia nandray ny soatoavin'ny raim-pianakaviana mpanorina ny firenena, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Enga anie ny fanahiny hiadana amin'ny fiadanam-po, ho toy ny soatoavinay orinasa. Ny soatoavin'ny fahendrena, ny fanajana, ny faharetana ary ny fampandrosoana ny olombelona dia nanjary kompà antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. ”
“Ny zava-misy fa ity fandraisana andraikitra ity dia notontosain'ny birao manerana ny firenena miaraka amin'ny taratry ny firaisam-pirenena ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Midika ihany koa izany ny fireharehan'ny firehareham-pirenena amin'ny zava-bita azo tsapain-tanana izay efa tanteraky ny UAE nandritra ny tantarany. ”